Ogaden News Agency (ONA) – UNPO oo 20 Sano Jirsatay, Iyo Muuqaalki Ogadeniya oo ka muuqda UNPO.
UNPO oo 20 Sano Jirsatay, Iyo Muuqaalki Ogadeniya oo ka muuqda UNPO.
Posted by ONA Admin	/ January 22, 2012
Ururka UNPO waxa uu jira hadda 20 sanno waxaana la asaasay sanadkii 11/February/1991. Waxaana lagu asaasay Magalada Hague ee Wadanka Holland. Mudadii uu ururkaan jiray waxa uu suurto galiyay in qowmiyadaha aan codka laheyn ee san heysan dowlad matasha inay cod u noqdaan waxana ururkan uu noqday Haayad lamid ah Qaramada Midobay oo kale. Ururkan waxa uu qowmiyadahaas uu codka u yahay uu gaadhsiya cabashadooda fagarayaasha caalamka, sida Kulamada EU iyo UN-ta.
Somalida Ogadeniya waxa u matala UNPO oo xubin buuxa ka ah Ururka ONLF ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo ku biiray 6 February 2010. Taas oo ka dhigaysa In Ogadeniya ay ku jirto 2 Sanno oo kamil ah Marka ururkan 20 Sano gaadho daddisu. Mudadaas kooban Ururkan UNPO maxuu ku soo kordhiyay qadiyada Ogadeniya ee lagu baadi goobayo Xoriyada Iyo aaya ka tashiga somalida Ogadneiya.
Laba Sanno waa muddo aad u yar, Balse waxa xasuus mudan In UNPO ay qabteen ama kaalin libaax leh ka qaateen Shirar heerkoodu aad u sareeyo oo qadiyada Ogadeniya ay ku shaacinayaaan waxaana xasuus mudan kulankii loogu magacdaray:
Hearing on Human Rights in Ogaden, European Parliament, Brussel.
Shirkaas oo baarlamaanka Europe ay ku qiimeynayeen xaalada xuquuql insaan ee Ogadeniya Canbaareyna loogusoo jeediyay taliska Gumeysiga ah ee Ethiopia bishii March 2010. Waxa kale oo isna isla sanadkaas ay soo qaban qaabiyeen shirkale oo ka dhacay Guriga Baarlamaanka Europe December 2010 oo ay UNPO soo qaban qaabisay kaas oo lagu magacabay.
Halkan ka fiiri
Ethiopia’s Stalled Democracy: A Spotlight on the Ogaden
Sido kale sanadki tagay ee 2011 waxa ay kaalmo heersare ah oo isugu jira shirar lagu qabtay Guriga Baarlamanaka Europe iyo Goobo kale oo UNPO isugu timidba ay qadiyada ogadeniya kaga qeyb qaateen shaacintooda. waxana kaso qaadan karna kulanki weynaa ee
Kulamada Joogtada ah ee UNPO ay qadiyada Ogadeniya u qabatay waxaa barbar socday inay wararka muhiimka ah ee ku saabsan qadiyada Ogadeniyana ay gudbiso oo gaadhsiiso hayadaha caalamiga ah iyo kuwo dawliga ah ee wax kaqaban kara. Waxayna wararka Ogadeniya ee ay soo saarto Jabhadu gaadhsiin jireen meelo muhiim u ah qadiyada shacabka Somalida Ogadeniya.
Haddaba Ururkan UNPO oo sharciyadiisa uu ku dhisanyahay ay kamid tahay inay u doodaan shucuubta laga awooda badan yahay ee u halgamaya xoriyadooda sidii ay ku heli lahayeen aayo ka tashigooda ayaa waxa soo baxaysa in ururkan uu qadiyada Ogadeniya uu u qaatay si xooggan ahmiyad balaadhana uu siinayo.
warbixintii xuska sanad guurada 20aad ee ururka UNPO ugu dabbaal dagayay ayaa waxa ay kusoo saareen bogga hore sawir weyn oo ku sawiranyahay nin somalida Ogadeniya ah oo ku tukanaya Masaajid ku yaala dhulka Somalida Ogadeniya. Arrinkaas ayaa waxa ay tilmaam u tahay Ururkan sida uu daacada uga yahay innu taagero qadiyada Somalida Ogadeniya oo ah mid wayaadan danbe xiiso badan ay siiyaan beesha caalamku.